Vidio: Gịnị ka Seth ga-eme? | Martech Zone
Ka m na-ele uto nke Compendium Blogware, ọ na-eme m obi ụtọ na m rụrụ ọrụ oge mbụ (ma na-arụ ọrụ dị ka m nwere ike) na azụmaahịa na-agbanwe omume na ihu ala nke otu azụmaahịa si akpọtụrụ atụmanya ha na ndị ahịa ha.
Chris Baggott bụ onye nkwusa ozioma maka onye na-ajụ ase yana ụlọ ọrụ ya bụ ihe akaebe nye onye na-ajụ ase, ngwa ndị na-enyere nkwukọrịta a aka, yana ịgbasawanye nke itinye ihu mmadụ na azụmaahịa. Chris na Cantaloupe.TV mere nke a ihe nkiri pụrụ iche n'isiokwu ahụ.
N'ezie, abụkwara m onye na-agba agba Seth Chinekein, onye dere ihe kwesịrị ekwesị na ogologo ogologo na isiokwu nke ụlọ ọrụ ịde blọgụ taa!
Tags: Iwulite obodo na ntanetinsonaazụ azụmahịaNdiagugosipụta mgbasa oziarụmọrụarkgbasaandị na-achị achịmultidomainbenchmark na-abụghị ọrụihu peejimkpebiAkụkọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe yatweetreachọrụ